Safal Khabar - एउटै कथा 'लार' र 'पुवार'
एउटै कथा 'लार' र 'पुवार'
सोमबार, १५ असार २०७७, ११ : ०५
मुना चाैधरीद्वारा लिखित लार र पुवार एउटै कथा हुन् । पुवारको परिष्कृत रुप नै लार हो । लार र पुवारको अर्थ पराल हो । दुवै पढेँ । प्रस्तुतिका हिसाबले लुकेर पढ्नु पर्ने कथा बनेको छ ।
दुलारी उपन्यासकी सर्जक मुना चाैधरीले कथामा याैन मनाेविज्ञान पस्केकी छिन् । कथाले नेपाली समाजकै विषय उठाएकाे छ । तर कथाकाे सुरुवात र समग्र प्रस्तुति याैनप्रधान छ । कथा पढ्दा पाठककाे मानसपटलमा 'पाेर्न फिल्म' घुम्छ ।
बाह्रखरी डट कमले आयाेजना गरेकाे कथा प्रतियाेगिता २०७७ मा पहिलाे भएपछि लार कथा पहिले नै नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित पुवार कथाकाे परिस्कृत रुप भएकाे खुलासा भएकाे हाे । प्रतियाेगितामा समावेश भएका तीन सय कथामध्ये उत्कृष्ट घाेषित लार कथा र कथाकार चाैधरीमाथि अहिले चाैतर्फी टिप्पणी भइरहेकाे छ ।
आयोजकलाई मेरो प्रश्नः अप्रकाशित रचना हुनुपर्ने नियमलाई धोती किन लगाइयो ? लेखकलाई मेरो प्रश्नः उही रचनालाई परिमार्जन गरी प्रतियोगितामा किन पठाइयो ? पाठकलाई मेरो प्रश्नः यौनको विषय वा लुकेर पढिने साहित्य महिलाले लेख्न नपाइने हो ?
साहित्यमा लेख्न वर्जित कुनै विषय हुन्छ वा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कुरो प्रस्तुतिको हो । प्रस्तुति लेखकको निजी अधिकार हो । म निर्णायक होइन, त्यसैले कथाको उत्कृष्टता तर्फ पनि कुरा गर्दिन । तल लिङ्क छ, आफैं पढेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् ।
पुवार कथाको लिङ्क
लार कथाको लिङ्क
#मुना चाैधरी #कथा #लार #पुवार